Kwincwadi ethi The ikheshi iyelenqe. Ngengqiqo mihla, ingcamango kwavela ukuthenga ikheshi karhulumente ngo-1949.
Kudala phambi kokuba imali eyoqobo esetyenzisiweyo nezinye izinto imali. Shell wasebenzisa ezifana imali Polynesia. Eminye imizekelo "imali" kwakukho amatye, iintsiba, amagwegwe iintlanzi imfuyo.
Bloomingdale waba ixesha ngumlingane kule nkampani. Kungenjalo, waba kakhulu waduma indlalifa ukuya ivenkile kwisebe Bloomingdale kunye förhållade yayo notorious kunye nemodeli photo UVicki Morgan. Komnye umntu obalulekileyo kwimbali sangokuhlwa Club Matty Simmons. Simmons waba ngethuba vice mongameli sangokuhlwa Club kodwa edume kakhulu njenge komvelisi kamabonakude kunye film.
Le ikheshi snowball waseMelika ngoku nomnombo zaya zikhula ngokukhula minyaka le. Omnye nyathelo xa ekhutshwe ebhankini ikhadi debit lokuqala baqalisa kukhutshwa yi-Franklin National Bank of Long Island ngo-1951. Kungekudala, ukhuphiswano sangokuhlwa Club ngakumbi kwezi iinkampani bakhula iingxilimbela ezinkulu ikhadi lamatyala.
American Express kunye Wells Fargo
American Express yasekwa ngo-1850 e-Buffalo ukuze baphumeze inkonzo iposi. Kamva landiswa kunye ethwala imali kunye nemisebenzi kushishino nokhenketho. Henry Wells wasungula American Express kunye William Fargo noJohn Butterfield. zenethiwekhi abathathu zadityaniswa omnye. Ngenkulungwane 50 emva kwexesha, waqalisa imisebenzi ikhadi lamatyala kukhuphiswano kunye isidlo sangokuhlwa Club. Le nkampani iye yaba Mpondwana yayo ehlabathini kamabonakude. American Express iye ikomkhulu layo kwizakhiwo ezininzi eNew York.
Lokubagaya ubakhumbuza ngakumbi njengexhobongo Masonic ngaphezu ishishini. Le nkampani Ihlela purchases Ngamany kunye neenkonzo kubathengi. I-design ngandlel embhoxo unyango Rolls-Royce abathengi zabo. Kodwa amakhadi inkangeleko obutofotofo kufuneka azinakuthelekiswa imoto zodidi. Kunokuba ukuba "i netroli eengubo ezikrazukileyo nawezonakeleyo ndawonye nomswane." Kuyenzeka amaxesha ngamaxesha apha kule ncwadi. Athiywe ikhadi lamatyala ufumana ingqondo yombhali ukutshintshela ukusuka nengqondo kuya umbane neemvakalelo ezingakhiyo.
Discover Iinkonzo zeMali okanye nje elifutshane Discover kungenye US zamakhadi. Yasungulwa ngo-1985 kwiyantlukawano yenkampani ngezezimali Dean Witter yaba yinxalenye Sears.
Discover yaba inkampani ezimeleyo ngo-2007 Inika ikhadi Discover Card. Ikhadi nothungelwano zobugcisa ekuthiwa Discover Network kunye Pulse. Ikomkhulu suburban Chicago. 2008 wathenga Discover the sangokuhlwa Club of iqela zemali Citigroup.
Sears, lidliwa & Co. yasekwa ngo-1886 yi-Richard Sears kunye Alvah C. lidliwa ibhadi. Sears waba phezu kwexesha kuquka iinkampani inkulu US mail-order. Sears nayo enxulumene ne egcwele iphepha Sears Tower e Chicago ngoku ebizwa ngokuba Willis Tower. Amafu leyo kuba xesha kwakukho isakhiwo emide ehlabathini osezandleni de-2004 yi Sears.
credit card kunye nihlole ezisebenza amagama zebhanki ngendlela efanayo. Umnini akhawunti ubhala itshekhi kuba imali apho umamkeli ke ngentlawulelo kwi ebhankini. akhawunti Zemboniselo ukuze kufakwa (bathelekise amakhadi ngetyala). Umntu ochazwe efundisa itshekhi njenge "inguqulelo nkumba kwekhadi lebhanki" a. Xa kontantlöshetens ebuntwaneni sithetha kangangoko malunga yokusombulula itshekhi uluntu malunga ikheshi.
Ekuqaleni 90 yaba intlawulo wesixhenxe eSweden ngetshekhi. Ngo 2000, elo nani ezincinane 0.1 ekhulwini. Kunye iitshekhi ixesha yaphela iibhanki Swedish oko ngakumbi nangakumbi. Akukho namnye iibhanki yaseSweden nabuganga ezibiza kuphela checks. Ngoko, xa ibhanki Swedish ekugqibeleni wenza ukuba balandela elinye itshekhi nokwenzeka kokuvalelwa ubude. Njengoko ukwazi kukuba ubuqhetseba check lulwaphulo-mthetho kulo eUnited States, kodwa hayi ukuba overdraw akhawunti ngetyala.
A bit kwemali kwimbali
Kudala phambi kokuba imali eyoqobo esetyenzisiweyo nezinye izinto imali. Shell wasebenzisa ezifana imali Polynesia. Eminye imizekelo "imali" kwakukho amatye, iintsiba, amagwegwe iintlanzi imfuyo. Xa engekho imali rhoqo kufuneka intlawulo Ngamany maxa wambi kusetyenziswa. Ngokomzekelo, babesebenzisa nemivalo yesinyithi njengoko lwemali e Sparta ngenxa yokuba uyazimela ihlabathi ngaphandle.
Ntshonalanga eziinkozo waqala ukuba isetyenziswe imimandla Asia Minor ngo 600 BC Near East wayeza kwixesha ngoku kuMbindi Mpuma. Loo lydiske uKumkani uCroesus owathi ngo-500 BC baqala zazinegama iingqekembe zesiliva negolide. Kwakhona ngokuba uCroesus bayo ilizwi umntu kakhulu zizityebi. Apho kukho ukunqongophala kwe amatye anqabileyo osetyenziswayo kakhulu zezobhedu. Oku kwenzeka, umzekelo, ekuqaleni eRoma. Ngexesha Viking Age ngaphandle iingqekembe ezininzi eSweden esusela kokubini ihlabathi Islamic kwaye ukusuka amazwe aseYurophu. Kuba Vikings waba ixabiso isilivere, ngoko ukuthetha lwemali. Ngoko ke, nkqu iingqekembe eziphelelwe lixesha zesilivere izinto ezahlukeneyo isilivere ntlawulo. Kamva kweli bali, kwakukho copper elikhulu isicelo imali.